निको नै नहुने क्यान्सरजस्ता गम्भिर रोगको उपचारमा ठूलो धनराशी खर्च नगरौं - Jagaran Post
जागरणपोस्ट ११ श्रावण २०७७, आईतवार ०७:१०
नेपालमा क्यान्सर रोग दिन-प्रतिदिन बढ्दो छ । बदलिँदो जीवनशैली, गलत खानपान, धुँवाधुलोको प्रदुषण तथा सूर्तीजन्य पदार्थका कारण नेपालमा वर्षेनी हजारौं मानिसलाई क्यान्सर लाग्ने गरेको छ । झण्डै बीस हजारको हाराहारीमा नेपालमा क्यान्सर रोगीहरु रहेको अनुमान छ ।
नेपालमा क्यान्सर रोगको अवस्था जति भयावह छ, बिरामीको उपचार पनि त्यति नै जटिल छ । उपचारका लागि मानिसहरु विदेशसम्म जाने गरेका छन् भने आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरुले घरखेत बेचेर सुकुम्वासी बन्नुपरेेको छ ।
आखिर यो क्यान्सर के हो ? नेपालमा यसको उपचार पद्दतिको अवस्था के छ ? विदेश नै जानुपर्ने हो कि नेपालमै भर पर्दा हुन्छ ? अनि क्यान्सरका बिरामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के कस्ता छन् ?
यिनै प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा हामीले वीर अस्पतालमा कार्यरत बरिष्ठ डाक्टर मेडिकल अन्कोलोजिस्ट प्रा. डा. विष्णुदत्त पौडेलसँग क्यान्सर रोगको नालीबेली केलाउँदै लामो कुराकानी गरेका छौं ।
डा. पौडेल हाल न्याम्समा डीएम मेडिकल अन्कोलोजीका कोअर्डिनेटर छन् । उनी हाल ‘नेप्लिज एशोसिएसन अफ प्यालिएटिभ केयर’ का अध्यक्ष पनि हुन् । क्यान्सर रोगीलाई औषधोपचार मात्रै गरेर नपुग्ने भएकाले ‘प्यालिएटिभ केयर’ मा ध्यान दिनु अपरिहार्य रहेको डा. पौडेलको निश्कर्ष छ ।
क्यान्सरको नामै सुन्दा मानिसहरु आत्तिन्छन् । मानिसलाई यो रोगबारे राम्रो जानकारी नभएर यस्तो भएको हो ?
यसमा कमजोरी एकजनाको मात्रै नभएर सबैको छ । क्यान्सर रोगको उपचारमा सरकारले जति गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । जनतामा पनि क्यान्सरबारे पर्याप्त जनचेतना फैलिएको छैन । बिरामी पनि रोग लागेपछि मात्रै अस्पताल जाने गरेको पाइन्छ । जब कि रोग लाग्नुभन्दा पहिले नै त्यसको स्क्रिनिङ गर्न सकेमात्रै पनि यो समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, सुर्तीजन्य पदार्थका कारण पनि धेरैलाई क्यान्सर भएको पाइन्छ । तर, यसको प्रभावकारी रोकथामतिर कसैको ध्यान गएको पाइँदैन । कानुनले नै अस्पतालको सय मिटरको आसपास सूर्तिजन्य पदार्थ बेच्न रोक लगाएको छ । तर, व्यवहारमा भने अस्पताल वरिपरि नै जथाभावी सूर्तिजन्य पदार्थ बेचेको पाइन्छ । कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको पाइँदैन । त्यस्तै, प्रदुषणले पनि क्यान्सर रोग निम्त्याउने गर्छ । तर, प्रदुषण कम गराउन के-के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको खासै ध्यान गएको पाइँदैन । जनता पनि जागरुक भएको पाइँदैन ।
सबैभन्दा पहिले त कुनै पनि रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै उपयुक्त हो । यसका लागि रोकथाम एकदम जरुरी छ । यसका लागि कारकतत्वहरुबाट बच्नुपर्छ । जस्तै- सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन, मद्यपान गर्नबाट आफू पनि बच्नुपर्‍यो । परिवारका सदस्यलाई पनि रोक्नुपर्‍यो ।
बदलिँदो जीवनशैलीमा विशेष ध्यान दिने, खानपानमा विशेष सजगता अपनाउने, खानामा फलफूल, सागपात खाने, माछामासुमध्ये माछाको प्रयोग बढी गर्ने, प्रदुषण कम गर्ने, व्यायाम गर्ने आदि गरेर पनि यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक स्क्रनिङ जरुरी छ । यसका लागि महिलाहरुले आफ्नो स्तन आफैं जाँच्ने, ३/४ वर्षमा कम्तिमा एकपटक स्तनको स्क्रनिङ गर्ने, विवाहिता महिलाहरुले बेलाबेलामा पाठेघरको मुखको जाँच गर्ने, तथा स्कुल जाने उमेरका किशोर किशोरीहरुलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप लगाउने आदि गर्न सकिन्छ । ५० वर्ष पुगेका मानिसहरुले नियमित दिशा-पिसाब जाँच गराएर पनि यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
यसको मतलव, क्यान्सरको जाँच गर्न क्यान्सर नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । क्यान्सर हुनुअगाडि क्यान्सरको स्त्रिmनिङ गराएर पनि जोखिम धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । यो काम व्यक्तिगत रुपमा पनि गर्नुपर्‍यो, सामाजिक तहमा पनि गर्नुपर्‍यो । र, सरकारलाई पनि दबाव दिनुपर्‍यो ।
नेपालमा क्यान्सरका बिरामीहरु दिन प्रतिदिन बढ्नुको कारण के हो ?
नेपालमा नेशनल क्यान्सर रजिष्ट्री भन्ने छ, जसले प्रत्येक वर्ष नेपालका १०/१२ वटा अस्पतालबाट क्यान्सर रोगीहरुको तथ्यांक संकलन गर्छ । उसको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा करिब १० हजारको हाराहारीमा क्यान्सरका बिरामी दर्ता हुने गर्छन् । बाँकी करिब २० देखि ३० हजार क्यान्सरका विरामी भएको अनुमान गरिन्छ । तर, अस्पतालमा दर्ता भएका बिरामीको संख्या भनेको १० हजारको हाराहारीमा नै रहेको छ ।
बदलिँदो जीवनशैली, गलत खानपान, सूर्तिर्जन्य पदार्थको सेवन, कीटनाशक औषधिको प्रयोग लगायतले क्यान्सर रोगका बिरामी बढिरहेका छन् । हरेक वर्षको डाटाले क्यान्सरका बिरामी बढेकै संकेत गर्छ । तर, दुर्भाग्य के छ भने अन्य देशको भन्दा हाम्रो देशमा क्यान्सरका बिरामी अलि ढीलोमात्रै अस्पताल पुग्ने गर्छन् । कहिलेकाही साधारण उपचार गरेर बिरामीलाई सजिलो पार्न सकिने ठाउँमा पनि कहीँकतै, केही नमिलेर पनि बिरामीले अनावश्यक पीडा भोग्नुपरिरहेको देखिन्छ ।
यसबारे थानकोट हस्पिस र हस्पिस नेपालले केही समयअघि एउटा रिर्सच पेपर नै प्रकाशित गरेको थियो, जसमा हस्पिसमा आउने कति बिरामीलाई पीडा छ भनेर हेर्दा सयमा सय जनालाई नै पीडा भएको वा दुखाई भएको पाइएको थियो । यस्तो दुखाई कम गर्ने औषधि २/४ रुपैयाँ खर्च गरेकै भरमा नेपालमा किन्न पाइन्छ भन्ने कुरा नबुझ्दा पनि बिरामीहरु धेरै ठाउँमा भौंतारिनु परेको रिसर्चमा पाइएको थियो ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा क्यान्सर कत्तिको महंगो रोग हो ?
केहीले आर्थिक अभावका कारण उपचार पाउन सकेका छैनन् । कोहीले दूरदराजमा भएका कारण र उपचारको सुविधा सबैतिर उपलब्ध नभएका कारण पनि सुविधा पाउन सकेका छैनन् । अलिअलि सिस्टमले पनि अप्ठेरो पारेको देखिन्छ । सरकारले दिने एक लाख रुपैयाँकै उपचार सेवा लिनसमेत लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । सबैतिर राम्रो तरिकाले काम नभएको हो । त्यसैले यसको उपचारका लागि जुन किसिमको सिस्टमको विकास हुनुपर्ने हो, त्यो नभएकाले पनि समस्या आएको जस्तो लाग्छ ।
तर, सबै क्यान्सर महंगो हुँदैन । केही क्यान्सरको उपचार थोरैमा पनि गर्न सम्भव छ । जस्तो- सरकारले दिने एक लाखसम्मको सुविधाले स्तन क्यान्सरको हकमा ६ साइकलसम्मको केमोथेरापी दिन सकिन्छ । त्यस्तै फोक्सोको क्यान्सरमा पनि साधारण केमोथेरापीले पुग्छ ।
डा. देवकोटा पो सक्षम हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो चाहना र इच्छा अनुसार नै बेलायत जानुभयो । तर, त्यही प्रकृतिको रोग भएको मानिसलाई बेलायत जान सुझाव दिइयो भने त्यो परिवारको अवस्था के होला ?
अब अघि भनेजस्तै टार्गेटेड थेरापी तथा अन्य थेरापी केही महंगा होलान् । नत्र सबै उपचार महंगो छैन । यहीँ (वीर अस्पतालमा ) रेडियोथेरापी ५ हजारमा गर्न सकिन्छ । अझ सरकारले चाहने हो भने यसलाई निःशुल्क पनि गर्न सकिन्छ । यति हो कि यसलाई सिस्टममा लैजान सकियो भने मात्रै पनि उपलब्ध स्रोत साधनबाटै यस क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । सरकारले औषधिहरु सस्तोमा दिएर पनि यो समस्या कम गर्न सकिन्छ ।
कुन भागको क्यान्सर बढी जटिल हो ?
महिलाहरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सर बढी छ भने पुरुषहरुमा फोक्सोको क्यान्सर पहिलो स्थानमा छ । त्यसपछि पेटको क्यान्सर र मुखको क्यान्सर धेरै छ । अन्य रोगको दाँजोमा त क्यान्सर रोग जटिल नै मानिन्छ । यो रोगको कारण मृत्यु हुने दर पनि विश्वमा धेरै छ ।
विशेषगरी, हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देश, जहाँ स्रोतसाधनको कमी छ, हामीले धेरै बिरामीलाई बचाउन सक्दैनौं त्यसैले यो जटिल नै छ । यद्यपि, क्यान्सरको उपचारमा पनि धेरै विकास भैसकेको छ । समयमै रोग पहिचानद्वारा उपचार गरेको खण्डमा धेरै क्यान्सरलाई निको पनि पार्न सकिन्छ ।
तर, कहिलेकाँही ल्युकेमिया लगायतका रक्त क्यान्सर, गाँठागुँठी वा लो ग्रेडको क्यान्सरको उपचार गरिहाल्न पनि जरुरी छैन । पर्दैन । त्यसको उपचार गर्नु र नगर्नु एउटै हो । तर, कतिपय मानिसले बुझ्दाबुझ्दै वा नबुझेर, उपचार गरिरहेकै हुन्छन् । जबकि सबै क्यान्सरमा उपचार जरुरी छैन, त्यो क्यान्सरको स्टेज र परिस्थितिमा पनि भर पर्छ ।
तर, नेपालमा प्रायः बिरामीलाई सुरुमै क्यान्सर भएको जानकारी दिइँदैन, यो कत्तिको उचित हो ?
यसका दुईवटा पक्ष छन् । हामी पाश्चात्य जगतमा दीक्षित भएका डाक्टर र पूर्वी समाजमा हुर्केका मानिसहरुका आ-आˆनै धारणा छन् । आˆनो रोगबारे जान्न पाउने बिरामीको अधिकार हो भन्दै पाश्चात्य जगतमा यस्ता रोगबारे बिरामीलाई जानकारी दिने गरिन्छ । बिरामीले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने गरिन्छ । यसको राम्रो पक्ष पनि छ । किनकि जब तपाईलाई मर्दैछु भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसबेला तपाईलाई कतिपय व्यवहारिक तथा आर्थिक कुरा मिलाउन समय मिल्छ । मनका साधारण इच्छाहरु पूरा गर्न सक्छन् । त्यसकारण जानकारी दिनु सही पनि हो ।
तर, हाम्रो जस्तो समाजमा परिवारका सदस्यले बिरामीलाई रोगबारे जानकारी नगराउनुको कारण के हो भने यसले बिरामीलाई थप पीडा हुन्छ भनेर सोच्ने गरिन्छ । त्यसैले यो विषय अलिकति जटिल पनि छ ।
विकासक्रमको कुरो गर्दा नेपालमा क्यान्सरको उपचार कहिलेदेखि, कसरी सुरु भयो ?
नेपालमा क्यान्सर रोगको उपचार सुरु भएको सन् १९९१ बाट हो । त्यसबेला बीर अस्पतालबाटै क्यान्सरको उपचार सुरु भएको हो । त्योभन्दा अगाडि नेपालमा क्यान्सरको उपचार गर्ने संस्थाहरु थिएनन् । केही तालिम प्राप्त चिकित्सकहरुले कान्ति अस्पतालमा उपचार त गर्नुहुन्थ्यो । तर, उपचारकेन्द्रकै रुपमा विकसित भएको भनेको वीर अस्पतालबाटै हो ।
त्यसबेला वीर अस्पतालमा आउने क्यान्सरका बिरामीमध्ये महिलाहरुमा पाठेघरको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर नै प्रमुख थियो । त्यस्तै, पुरुषहरुमा फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर प्रमुख थियो, जुन अहिले पनि छ ।
त्यसबेला वीर अस्पतालमा क्यान्सर रोगको उपचार रेडियोथेरापीबाट सुरु भएको थियो । शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकहरुले उपचार शल्यक्रियाद्वारा नै उपचार गर्थे । त्यसबेेला स्तन क्यान्सर भएमा स्तन नै काटेर फालिन्थ्यो । अहिले क्यान्सर भएको भाग तथा वरिपरिको केही भागमात्रै काटेर फालिन्छ । यसको अर्थ के हो भने अब सर्जरीमा पनि परिवर्तन आएको छ ।
उपचार प्रविधिमा आएको त्यो परिवर्तन के हो ?
पहिले पूरै भाग काटेर फाल्ने गरिएकोमा अहिले निश्चित ठाउँलाई मात्रै काटेर फालिन्छ । त्यस्तै, जहाँ क्यान्सर छ, त्यसलाई मात्रै फोकस गरेर उपचार गरिन्छ । तर, त्यसलाई सम्पूर्ण बिरामीमाझ पुर्‍याउन सकिएको छैन, त्यो अर्कैर् कुरा हो ।
रेडियोथेरापीमा पनि नयाँ-नयाँ प्रविधिहरु भित्रिइरहेका छन् । पहिले कोबाल्टबाट सुरु भएको रेडियोथेरापी मेसिन अहिले लिनियाकसम्म आइसकेको छ । पहिले केमोथेरापी थियो भने अहिले टार्गेटेड थेरापी आइसकेको छ । यस हिसाबले परिवर्तन त आएकै छ । अझै यसलाई समस्त रुपमा समग्र रुपमा सर्वसाधारणमाझ पुर्‍याउन सकिएको छैन, त्यो बेग्लै कुरा हो । बरु भएकै कुरालाई पनि राम्ररी सदुपयोग गर्न सकेमात्रै पनि नेपालमा धेरै ठूलो कुरा हुन्थ्यो ।
अहिले हाम्रो देशमा क्यान्सरको उपचारमा के- कस्ता प्रविधिहरु प्रयोगभइरहेका छन् ?
क्यान्सरको उपचारमा सबैभन्दा पुरानो उपचार पद्दति शल्यक्रिया नै हो, जसमा क्यान्सर भएको भागलाई काटेर फाल्ने गरिन्छ । त्यसपछि आएको उपचार पद्दति रेडियोथेरापी हो । त्यसपछि आएको केमोथेरापी हो, जसमा औषधि तथा इन्जेक्सनको माध्यमद्वारा बिरामीको उपचार गरिन्छ । त्यसपछि पनि नयाँ आएको भनेको टार्गेटेड थेरापी हो । यो पनि एक किसिमको औषधि नै हो । र, यो उपचार पद्दति पनि नेपालमा विकसित हुँदै गएको छ ।
क्यान्सर रोगको उपचारमा कुन प्रविधि प्रयोग गरिने भन्ने कुरा क्यान्सरको स्टेज अनुसार फरक हुन्छ । तथापि अहिले आएको टार्गेटेड थेरापी अलि मंहगो हुने भएकाले यो उपचार पद्दति सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । अन्य उपचार पद्धति त प्रायः सबै प्रयोगमै छन् ।
विश्वमा पाइने उपचार पद्दति नेपालमा छ त ?
नेपाल विकाशोन्मूख देश भएकाले हाम्रा केही सीमाहरु छन् । बेलायत, अमेरिकालगायतका देशमा उपलब्ध सबै उपचार पद्दति त यहाँ छैनन् । यस्ता पद्दति भनेको देश जति विकसित भयो, त्यत्ति नै विकसित हुने हो । सुविधाहरु पनि त्यही अनुसार हुने हो ।
तर, पनि क्यान्सर रोगमा अपनाइने उपचार पद्दति नेपालमा पनि लगभग उस्तै नै छ । खाली त्यसलाई बिरामीमाझ उपलब्ध गराउन तथा बिरामीको पहुँचमा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
यस्तो हुँदाहुँदै विशिष्ट व्यक्तिहरु विदेश जानुको कारण के हो ?
नेपाल एउटा विकासोन्मुख राष्ट्र भएकाले आर्थिक दृष्टिकोणले सकिन्छ र बाहिर गए राम्रो उपचार पाइन्छ भन्ने मानसिकताका कारण पनि थुप्रै मानिस विदेश गएको पाइन्छ । त्यसबाहेक, कहिलेकाहीँ बाध्यता पनि हुन्छ । सुविधा पाइन्छ भने जाऔं भनेर जानेहरु पनि धेरै छ ।
विदेश जानेमा यहीँ उपचार सम्भव नभएका वास्तविक रोगीहरु नै हुन्छन् भन्ने पनि छैन । यदि नेपालमा उपचार नहुने रोगहरुको हकमा क्यान्सर रोगका विशेषज्ञहरुले रोगको प्रकृति अनुसार सिफारिस गर्ने प्रचलन भयो भने त्यसलाई रोक्न सकिन्छ ।
क्यान्सरको उपचारसम्बन्धी कुरा गर्दा जहिले पनि किमोथेरापीको प्रयोग हुने गरेको सुनिन्छ । तर, विकसित देशमा त किमोथेरापी फेजआउट भैसक्यो भन्छन् नि ?
तपाईलाई कसले भन्यो ? अहिले पनि मकहाँ अमेरिका, बेलायत, क्यानाडामा पढेका विद्यार्थीहरु आउने गर्छन् । म पनि बेलाबेलामा विश्वका विभिन्न देश घुम्ने गर्छु । मैले यो किन भन्दैछु भने विश्वमा के-कस्ता उपचार पद्दति प्रयोग भैरहेका छन् भन्ने बारेमा म राम्रोसितले अपडेट छु । अहिले पनि विभिन्न देशहरुमा केमोथेरापी नै प्रयोगमा छ । आउटडेटेड नै भैसकेको छैन । तर, अहिले केमोथेरापीका साथसाथै टार्गेटेड थेरापी उपलब्ध भएकाले त्योचाँहि उतातिर धेरै प्रयोग हुन थालेको छ ।
हामी पनि बिरामीलाई टार्गेटेड थेरापीलाई केमोथेरापीसित मिलाएर दिने गर्छौं । त्यसैले यति भन्न सकिन्छ कि विश्वबाट केमोथेरापी हटिसकेको छैन ।
केमोथेरापी र टार्गेटेड थेरापीबीच के भिन्नता छ ?
सामान्यतयाः हाम्रो शरीरमा कोषिकाहरुको वृद्धि भैरहेका हुन्छन् । तर, क्यान्सर भएमा शरीरका कोषिका अनियन्त्रित तरिकाले बढ्ने गर्छन् । जसलाई नियन्त्रण गर्न केमोथेरापी दिइने गरिन्छ ।
केमोथेरापी भनेको एकप्रकारको औषधि नै हो । यो इन्जेक्सन तथा औषधिको माध्यमद्वारा पनि दिइने गरिन्छ । शरीरभित्र गएपछि यसले शरीरमा वृद्धि भइरहेको कोषिकालाई असर पार्छ, जसका कारण केमो लिने मानिसको कपाल झर्नुका साथै रगत कमी हुनेलगायतको असर पर्ने गर्छ ।
केमोथेरापीले कुन कोषिका क्यान्सरजन्य हो र कुन क्यान्सररहित हो भन्ने छुट्याउँदैन । र, यसले बारुदको छर्राझैं शरीरका सबै कोषिकाहरुलाई असर पार्ने हुदाँ यसको साइड इफेक्ट धेरै हुने गर्छ ।
जबकि टार्गेटेड थेरापीले बन्दूकको गोलीले झैं क्यान्सर भएको विशेष भागमा मात्रै प्रहार गर्ने हुदाँ यसको ‘साइड इफेक्ट’ केमोथेरापीको तुलनामा केही कम हुने गर्छ ।
डा. साहेब, तपाई ‘नेप्लिज एशोसिएसन अफ प्यालिएटिभ केयर’ को अध्यक्ष हुनुहुन्छ । के हो यो ‘प्यालिएटिभ केयर’ भनेको ? यसबाट क्यान्सरका बिरामीलाई के फाइदा हुन्छ ?
क्यान्सर भएपछि यसको रोकथाम गर्ने एउटा उपचार पद्दति हुन्छ । जसमा सर्जरी गर्ने, रेडियोथेरापी दिने, किमो लगाउने गरिन्छ । तीबाहेक पनि क्यान्सरका बिरामीलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक पीडा हुन्छ । कुनै परिवारको एकजनालाई क्यान्सर भयो भने परिवारका समस्त व्यक्ति मानसिक तथा आर्थिकरुपले पीडित हुन्छन् ।
त्यसैकारण, क्यान्सरका बिरामीलाई क्यान्सरको मात्रै उपचार नगरेर उसलाई र उसको परिवारलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक सर्पोट गर्ने जुन एउटा होलिस्टिक एप्रोच हो, त्यसलाई हाम्रो भाषामा प्यालिएटिभ केयर भनिन्छ । क्यान्सरको उपचारमा यो अति आवश्यक छ ।
प्यालिएटिभ केयर भनेको मुख्यगरी क्यान्सरको बिरामीको ‘क्वालिटी अफ लाइभ’ सुधार गर्नु हो, क्वान्टिटी हैन । उदाहरणका लागि कुनै एउटा बिरामी एक महिना वा ६ महिनामात्रै बाँच्नेछ भने उसको उमेरलाई लम्ब्याउने भन्दा पनि ऊ जति दिन बाँच्छ, त्यति दिन शारीरिक वा मानसिक पीडा कम गराउन खोज्नु हो । अनावश्यक खर्च नगराउनु हो ।
यसका साथसाथै बिरामीको परिवारका सदस्यहरुलाई पनि सपोर्ट गर्ने, ढाडस दिने, बिरामीको अवस्थाबारे उनीहरुलाई जानकारी गराउने लगायतका सम्पूर्ण सर्पोट गर्ने काम प्यालिएटिभ केयर अन्तर्गत पर्छन् ।
कहिलेकाहीँ यस्तो पनि स्थिति आउँछ कि क्यान्सरको मुख्य उपचार पद्दति सर्जरी, रेडियोथेरापी, किमोथेरापीको खासै काम रहँदैन । त्यस्तोबेला प्यालिएटिभ केयर मात्रैको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ । कहिलेकाहीँ सुरुको अवस्थामा प्यालिएटिभ केयरको आवश्यकता थोरै मात्र पर्न सक्छ । तर, रोग माथ्लो स्टेजमा पुगेपछि बिरामी र उनको परिवारलाई यसको आवश्यकता बढी पर्न सक्छ ।
हामीले वीर अस्पतालमा पनि प्यालिएटिभ केयर दिँदै आएकाछौं । भक्तपुर अस्पतालले पनि प्यालिएटिभ केयर दिँदै आएको छ । त्यस्तै, हस्पिस तथा हस्पिस नेपालले पनि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा प्यालिएटिभ केयर दिँदै आएको छ । भरतपुर अस्पतालले पनि यो सेवा दिँदै आएको छ ।
हुन त म मेडिकल अन्कोलोजिस्ट हुँ । तर, नेपालमा केमोथेरापी मात्र पर्याप्त छैन, यसबाहेक पनि विशेष उपचारको जरुरत छ भनेर यो क्षेत्रमा लागेको हुँ ।
प्यालिएटिभ केयरको अवधारणा विश्वमा कसरी आयो ?
बेलायतमा सिसिलिस सन्ड्रसु भन्ने नर्स हुनुहुन्थ्यो । उहाँ सेन्ट क्रिस्टोफर भन्ने अस्पतालमा काम गर्नुहुन्थ्यो । त्यहाँ कार्यरत डाक्टरहरु बिरामीको पीडा कम गर्नेतर्फ भन्दा केवल रोगमा मात्रै केन्दि्रत भएर काम गरेको देखेर सिसिलिसले नै प्यालिएटिभ केयर सुरु गर्नु भएको हो ।
उहाँले यो सेवा सुरु गर्दा उहाँ नर्सका रुपमा मात्रै काम गर्ने हुदाँ नर्सको कुरा कसैले नसुनेपछि उहाँ पछि गएर डाक्टर नै बन्नुभयो । यसरी सिसिलिसले सन् १९६७ मै यो सेवा सुरु गर्नु भएको हो । पछि यो उपचार पद्दति अरु देशहरुमा पनि विकास हुन थाल्यो । हाल प्यालिएटिभ केयर संसारभर प्रचलनमा छ ।
म बेलायतबाट र्फकंदा नेपालमा प्यालिएटिभ सम्बन्धी अवधारणा खासै विकास भएको थिएन, जसका कारण बिरामीहरु मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने गर्थे । जब कि एक रुपैयाँको औषधिबाट पनि यस्तो पीडा सजिलै कम गर्न सकिन्थ्यो । यो कुरा मैले विदेशमा देखेको भएर मलाई यसको निकै अभाव खड्कियो । त्यसपछि मैले यही विषयमा काम गर्न सुरु गरें ।
मैले श्रीलंकामा अन्कोलोजीको तालिम लिने क्रममा देखेको थिएँ । यसबारे बेलायतमा तालिम लिदाँ थाहा पाएँ । त्योभन्दा पनि यहाँ उपचार लिन आउने बिरामीहरु छटपटाइरहेको र नेपालमा प्यालिएटिभ केयरसम्बन्धी अलगै युनिट नभएकाले पनि मलाई लाग्यो, यी बिरामीलाई किमो भन्दा धेरै प्यालिएटिभ केयरको जरुरत छ । त्यसैले मैले यस क्षेत्रमा केही गर्ने सोचें र सौभाग्यवस यसमा पढ्ने र पढाउने अवसर पनि पाएँ ।
तर, यसमा हाम्रो समाजले जति बुझ्नुपर्ने हो, त्यति बुझिसकेको छैन । अझै धेरै गर्न बाँकी छ । त्यसैलेस्वास्थ्य मन्त्रालयसित मिलेर हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरु दिँदै आएका छाैं ।
प्यालिएटिभ सेवा क्यान्सरका विरामीलाई मात्रै दिइन्छ वा अरु विरामीलाई पनि ?
यो केयर अरु बिरामीलाई पनि दिन सकिन्छ । हामी क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएकाले क्यान्सरमा बढी फोकस छांै । तर, यो केयर रुघाखोकी लागेका, दम लागेको, मिर्गौला फेल भएका, मुटु रोगी वा अन्य कुनै पनि बिरामी जो अन्तिम अवस्थामा छन्, र उपचार सम्भव छैन, उनीहरुलाई पनि दिन सकिन्छ, चाहे त्यो एड्सकै बिरामी किन नहोस् । तर, नेपालमा चाहिँ क्यान्सर विशेषज्ञ धेरै यसमा लागेकोले यसमै बढी दिइन्छ ।
प्यालिएटिभ केयर सुरु गरिसकेपछि बिरामीको पीडामा कमी आएको पाएँ । बिरामीलाई दुखिरहेको छ, पोलिरहेको छ भने पनि यसको मद्दतले विरामीलाई राहत मिलेको महसुस भयो । त्यसबाट बिरामीले जुन राहत पाउँछन्, त्यसबाट सन्तुष्टि पाइन्छ ।
क्यान्सरको रोगीका लागि विरामी भएपछि उसलाई क्यान्सरको उपचार त चाहिन्छ नै । उपचारका साथमा अन्य सर्पोट पनि एकदमै जरुरी पर्छ । मैले कतिपटक देखेको छु, जो महिलाहरु क्यान्सर भएर आउँछन्, र, उनीहरु सुरुकै स्टेजमै आए भने पनि म कहिले मर्छु भन्ने चिन्ता भन्दा पनि मेरा छोराछोरीले भविश्यमा पढ्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, खान पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने चिन्ता बढी हुने गरेको छ । यसकारणले पनि क्यान्सरका बिरामी र उनीहरुको परिवारलाई सहयोग आवश्यक छ ।
क्वालिटी लाइफमा रोगलाई मात्रै फोकस गरिँदैन । एउटा बिरामी आउँदा स्तन क्यान्सरको समस्या मात्रै लिएर आएको हुँदैन । उसलाई क्यान्सर छ भने औषधि दिँदा उसको शारीरि पीडा कम हुन्छ भने त्यो पनि क्वालिटी लाइफभित्रै पर्दछ । सँगै उसलाई मानसिक तनाव पनि भैरहेको हुन्छ । यस विषयमा कुराकानी गरेर पनि उसको तनाव कम गर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ बिरामीहरु आत्तिने, दौडने गर्छन् । त्यसबेला उनीहरुलाई उनको क्यान्सर कुन स्टेजको हो भन्नेबारे काउन्सिलिङ्ग गरेर पनि उनीहरुको ‘क्वालिटी अफ लाइफ’ राम्रो बनाउन सकिन्छ ।
तर, क्यान्सरका बिरामीलाई प्यालिएटिभ केयरमा जोड दिने कि उपचारमा ? एउटा क्यान्सरको बिरामीका लागि ‘क्वालिटी अफ लाइभ’ बढी आवश्यक हुन्छ कि ‘क्वान्टिटी’ ?
तपाईले धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । कतिपय अवस्थामा एउटा क्यान्सरको बिरामीका लागि क्वान्टिटी अफ लाइभ पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । जसमा विभिन्न उपचार पद्दतिको प्रयोगद्वारा बिरामीलाई निको पार्न सकिन्छ । त्यसबेला हामीले क्वालिटीमा भन्दा क्वान्टिटीमै केन्दि्रत हुनुपर्ने हुन्छ ।
उदाहरणका लागि, हाम्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नै लिन सकिन्छ । उहाँको क्यान्सर निको हुने स्टेजमा थियो । उपचार गरियो । निको पारियो । अहिले क्वान्टिटी अफ लाइभ बिताइरहनुभएको छ । सक्रिय जीवन बिताइरहनुभएको छ ।
त्यस्तै, यसभन्दा अगाडि पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पनि क्यान्सर भएको थियो । उपचार गरियो । निको बनाइयो । यसले क्वान्टिटी अफ लाइफ बढ्यो र देशको प्रधानमन्त्री नै बन्नुभयो । भर्खरै देख्नुभयो, नेपालकै वरिष्ठ न्युरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटा बेलायत नै गएर त्यत्रो पैसा खर्च गरे पनि आखिर उहाँलाई निको पार्न सकिएन ।
यसकारण, बिरामी कुन अवस्थामा छ, त्यो निर्क्याैल गर्न जरुरी छ । पैसा खर्च गरेर निको नहुने बिरामीलाई घरबार, खेत, सम्पत्ति बेचेर उपचार गर्नुपनि हुँदैन । जुन, हाम्रो देशमा यदाकदा देखिने गरेको छ । डा. चित्रबहादुर वाग्लेको कहानी योभन्दा अछुतो छैन ।
डा. वाग्ले अन्तिम अवस्थामा आउनुभयो । उपचारका लागि भारत पनि जानुभयो । लाखौं रुपैयाँ खर्चिनु भो । जिन्दगीभरको कमाइ सक्नुभो । पत्रपत्रिकामै पनि कुरा आयो, कि श्रीमती र छोराछोरीलाई अप्ठेरो भयो । यो भनेको ‘मिस गाइडेड’ हो ।
निको नहुने क्यान्सरलाई निको हुँदैन पनि भन्न सक्नुपर्छ । अनावश्यकरुपमा पैसा खर्च गराएर मात्र काम छैन । किनभने, क्यान्सरका विरामीमात्रै एक्लो हुँदैन । उसको पनि परिवार हुन्छ । उनीहरुलाई पनि बाँच्नुपर्छ । त्यसैले, यो कुरालाई छुट्याउन जरुरी छ । निको हुनसक्ने बिरामीलाई हदैसम्मको उपचार गरेर निको नहुनेलाई निको हुँदैन भन्न जरुरी छ ।
डा. देवकोटा पो सक्षम हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो चाहना र इच्छा अनुसार नै बेलायत जानुभयो । तर, त्यही प्रकृतिको रोग भएको मानिसलाई बेलायत जान सुझाव दिइयो भने त्यो परिवारको अवस्था के होला ? त्यसैले, यस्तो रोगको उपचार गर्दा विचार गर्नैपर्ने हुन्छ।
एक अंकमा झर्‍यो कोरोना संक्रमण
२४ घण्टामा २१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
थप ८ जनामा कोरोना संक्रमण, १९० जना सक्रिय
४,०१० नमुना परीक्षण गर्दा १७ जनामा संक्रमण
मतदानका दिन खोप अभियान सञ्चालन नहुने
अमेरिकामा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा
मुगु अस्पतालमा बिरामी भरिभराउ
२४ घण्टामा थप १५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि